Khelkud Post – ZoomNP
चैत १९ – च्याम्पियन्स लिग फुटबल युरोपका क्लबबिचको सबै भन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो । यो सिजनका लागि क्वाटरफाइनलमा पुग्ने टिमको टुंगो लागि सकेको छ । अब क्वाटरफाइनलमा खेल सुरु भएपछि उपाधिका लागि नजिक पुग्ने टिमको आंकलन थप बलियो बन्दै जानेछ । च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा विभिन्न क्लब तथा खेलाडीले धेरै कीर्तिमान बनाएका छन् । यसमध्ये क्रिष्टियानो रोनाल्डोले दुई क्लबबाट ५० भन्दा धेरै खेलमा सहभागी हुने कीर्तिमान बनाएका छन् । यस्तो कीर्तिमान बनाउने उनी...
काठमाडौं १७ चैत्र – बंगलादेशमा जारी एसिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले हङकङलाई ७ विकेटले हराएको छ। २१५ रनको चुन‌ौती पाएको नेपालले ३ विकेट गुमाउँदै ‍‌‌४२.२ ओभरमा ऐरीको छक्कासँगै २२० रन पूरा गरेको हो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ले ११ चौका सहित ७०, आसिफ सेखले ८ र दीलिपनाथले १२ रन जोडेर आउट भएका थिए। शरद भेषवाकरले तीन छक्का र चौकासहित अर्धशतक पूरा गर्दै कूल ५१ बल खेलेर ५५ रन जोडे। तयस्तै दीपेन्द्र सिंह...
समूह चरणमा लगातार दुई खेल हारेका यी दुई टोली आज प्रतिष्ठाको लडाईंमा छन् । एसियाली तथा विश्वस्तरका विभिन्न प्रतियोगितामा नेपाल र हङकङ परिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन् । एक अर्काको खेल रणनीति राम्रोसँग बुझेका दुबै टोली आजको खेल जित्दै दुई अंकको साथ बंगलादेशबाट घर फर्किने अभियानमा हुनेछन् ।
काठमाडौं, चैत १६ । विश्वकप फुटबल छनोट अन्तर्गत एशियाली समुहका खेलहरुमा जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ईरान विजयी भएका छन् ।
समुह ए को खेलमा ईरानले चीनलाई १-० ले हराउँदा दक्षिण कोरियाले सिरिया तथा उज्वेकिस्तानले कतारलाई पनि १-० ले नैं पराजित गरेका छन् ।
एशियाली समुह बी को खेलमा अस्ट्रेलियाले युएईलाई २-० ले हरायो । जापानले थाईल्याण्डलाई ४-० ले पराजित गर्दा साउदी अरबियाले इराकमाथि १-०...
रुसमा सन् २०१८ मा हुने विश्वकप छनोट अन्तर्गत शुक्रबार चिलीसँग भएको खेलमा म्याच अफिसियलमाथि मेस्सीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । खेलको दौरान मेसीले लाइन्स म्यान मार्सेलो भानलाई अभद्र गाली गरेको बीबीसीले जनाएको छ । चिलीलाई पराजित गरेको खेलमा अर्जेन्टिनाका लागि मेस्सीले एक गोल गरेका थिए । उनलाई ८ हजार १ सय पाउण्ड समेत जरिवाना गरिएको छ । चार खेलको...
काठमाडौं, १५ चैत । बंगलादेशमा जारी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा नेपाल बंगलादेशसँग ८३ रनले पराजित भएको छ । बंगलादेशले दिएको २५८ रनको लक्ष्य नेपालले ४२. ३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र १७४ बनाउन सक्यो । लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
आजको खेलमा ब्याट्सम्यानहरुले खुलेर खेल्न सकेका थिएनन् ।
दिपेन्द्र सिंह ऐरी दिलीप नाथले सबैभन्दा बढी ९८ रनको साझेदारी गरे । त्यस्तै दिलिप नाथ ४१ रनमा आउट भएका थिए । ऐरी ५६ रनमा आउट...
एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसंग पराजित
काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानको यु–२३ टोलीसँग ६ विकेटले पराजित भएको हो ।
बंगलादेशको शेखकमल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा नेपालले दिएको १८१ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले ४५ ओभर बलमा मात्र ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । पाकिस्तानको जितमा इमाम उल हकले १०० रनको अविजित शतकीय पारी खेले । त्यस्तै हमाद आजमले अविजित २२ रन जोडे । नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र सन्दिप...
रियल मड्रिडले क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई चिनियाँ क्लबलाई बेच्ने!
काठमाडौं चैत १२ क्रिष्टियानो रोनाल्डो रियल मड्रिडका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। सन् २००९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिडसँग आबद्ध भएका रोनाल्डोले रियलका लागि ३८२ खेलमा ३९० गोल गरिसकेका छन्। राम्रो लयमा रहेका रोनाल्डोले यो सिजन क्लबका लागि २६ गोल गरिसकेका छन् र क्लब ला लिगाको शीर्ष स्थानमा छ।
तर, क्लबका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेज भने यो सिजन रोनाल्डोको प्रदर्शनबाट असन्तुष्ट रहेको दाबी स्पेनिस मिडियाहरुले गरेका छन्। स्पेनिश आउटलेट ...
एसिया कप छनोटको आगामी खेलमा बलियो फिलिपिन्सलाई जिल्याउने यस्तो छ नेपालको तयारी
काठमाडौ चैत १० नेपालले एसिया कप छनोट खेल्न पाउनु आफैंमा अप्रत्याशित अवसर हो । विश्व कप छनोट र एसिया कप छनोटका लागि भारतसँग खेलिएको प्रारम्भिक छनोट खेलबाट बाहिरिए पनि नेपालले अन्तिममा सन् २०१९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा हुने एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) एसिया कप फुटबल प्रतियोगिताको छनोट खेल खेल्ने मौका पाएको छ । छनोट खेलको समूह ‘एफ' मा परेको नेपालले पहिलो खेल चैत १५ गते फिलिपिन्ससँग उसैको...
क्रिकेटप्रेमी नेपालीलाई खुसीको खबर: सनथ जयसूर्या सम्मिलित श्रीलंकन राष्ट्रिय टिमसंग बैशाखमा नेपालले टि-ट्वान्टी खेल्ने
काठमाडों । श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सनथ जयसूर्या, वर्तमान राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी सम्मलित टिम र नेपालको राष्ट्रिय टिम सम्मलित एक टोलीबीच काठमाडौंमा मैत्रीपूर्ण टी-ट्वान्टी खेल हुने भएको छ ।
पेरीविकल सर्भिसको आयोजनामा हुन लागेको टि ट्वान्टी क्रिकेट आगामी वैशाख १४, १६ र १८ गते किर्तिपुरस्थित टियु मैदानमा हुनेछ । श्रीलंका र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा हुन लागेको टि ट्वान्टीमा श्रीलंकाको टिम लंकन लायन्सको कप्तानी...